Mishiinka Buuxinta Malabka ugu Fiican oo leh 2 madax 4 madax 6 madax Soo saaraha iyo Warshada |Ipanda
Mashiinka Buuxinta Malabka Jar oo leh 2 madax 4 madax 6 madax
Mashiinkan waxaa si weyn loogu isticmaalaa buuxinta dareeraha, dareeraha viscous, koollada iyo alaabta suugo ee cuntada, daawada, kiimikada, kiimikooyinka maalinlaha ah, saliidda, daawada xoolaha, sunta cayayaanka iyo warshadaha kale.Sida saliidda la cuni karo, malabka, ketchup, khamriga bariiska, maraqa badda, maraqa basbaaska, maraqa likaha, subagga lawska, saliidaha, saabuunta dharka, saabuunta gacanta, shaambo, sunta cayayaanka iyo agab kale.Qaybaha xidhiidhka la leh agabka waxa ay ka samaysan yihiin bir tayo sare leh oo 304 ah, taas oo u hogaansan heerarka GMP.Suugo granular ah, tuubooyinka saddex-geesoodka ah ee pneumatic gaar ah iyo tubooyinka buuxinta ayaa la isticmaalaa.Taangiga waxaa lagu qalabeeyay qalab wax kicinaya si looga hortago walxaha inay dejiyaan oo ay xoojiyaan.
Kani waa mishiinkeena cusub ee buuxinta.Kani waa mashiinka buuxinta piston-ka-line ee kareemka iyo dareerahaWaxaa lagu gartaa cabbir sax ah , qaab dhismeed horumarsan , hawlgal xasiloon , buuq yar , cabbir weyn oo wax lagu hagaajinayo , xawaaraha buuxinta degdegga ah .Waxa kale oo ay ku haboon tahay buuxinta isbedbeddelka fudud, dareere bubbly fudud oo dareere ah oo xooggan oo loogu talagalay caag, caag, iyo viscosity sare, dareere, dareeraha semi-dareere ah.Hawl-wadeenadu waxay hagaajiyaan oo cabbiraan jaantuska guddiga kantaroolka shaashadda , sidoo kale waxay hagaajin karaan cabbirka madax kasta oo buuxin ah .Dusha sare ee mishiinkani waxa uu ka samaysan yahay bir aan wanaagsanayn .Muuqaal wanaagsan , lagu dabaqay heerka GMP .
1.AMashiinka buuxinta malabka utomatic,Xajmi yar, nakhshad macquul ah, hawl fudud, hawlqabad deggan, heerka guuldarraysa hooseeya;
2.Mashiinka oo dhan wuxuu ka samaysan yahay bir aan tayo lahayn oo tayo sare leh.Qalabka birta ah ee 304/316L waxaa loo isticmaalaa in lala xiriiriyo walxaha si loo buuxiyo shuruudaha nadaafadda GMP.
3.Buuxinta afka waxay qabataa aaladda aan sanbabka lahayn ee faleebada, buuxinta sawir siligga ah ma jirto, dhibicna ma leh;
4.Waxaa jira habab isku-habeyn oo mugga buuxinta, buuxinta xargaha hagaajinta xawaaraha, kaas oo hagaajin kara mugga buuxinta iyo xawaaraha buuxinta si aan kala sooc lahayn;saxnaanta buuxintu waa mid sareysa;
5.Marka loo eego shuruudaha deegaanka, waxaa loo bedeli karaa nooc buuxa oo qarxin ah oo aan lahayn.Gebi ahaanba waa laga demiyey tamartuna waa ka badbaadsan tahay.
Q1: Ma waxaad tahay shirkad soo saarta mashiinka ama shirkad ganacsi?
A1: Waxaan nahay soo saaraha mashiinka la isku halleyn karo oo ku siin kara adeegga ugu fiican.Mashiinkayagana waxa lagu beddeli karaa shuruudaha macmiilka.Ku soo dhawoow inaad booqato warshadeena!
Q2: Sideed u dammaanad qaadaysaa mashiinkan inuu si caadi ah u shaqeeyo?
A2: Mashiin kasta waxaa tijaabiya warshadeena iyo macmiilka kale ka hor inta aan la dhoofin, Waxaan hagaajin doonaa mashiinka si ay u saameyn wanaagsan ka hor inta aan la keenin.Oo firaaqadu had iyo jeer waa diyaar oo bilaash ayey kuu tahay sanadka dammaanadda.
Q3: Sideen u rakibi karaa mashiinkan marka uu yimaado?
A3: Waxaan u diri doonaa injineerada dibadda si ay u caawiyaan macmiilka rakibidda, hawlgelinta iyo tababarka.
Q4: Ma ka dooran karaa luqadda shaashadda taabashada?
J4: Dhib malahan.Waxaad dooran kartaa Isbaanish, Faransiis, Talyaani, Carabi, Kuuriyaan, iwm.
Q5: Maxaan sameeyaa si aan u doorto mishiinka noogu fiican?
A5: 1) ii sheeg alaabta aad rabto inaad buuxiso, waxaanu dooran doonaa nooca mashiinka ku habboon si aad u tixgeliso.
2) Kadib dooro nooca mashiinka ku habboon, ka dibna ii sheeg awoodda buuxinta ee aad u baahan tahay mashiinka.
3) Ugu dambeyntii ii sheeg dhexroorka gudaha weelkaaga si ay nooga caawiso inaan kuu doorano dhexroorka ugu fiican ee madaxa buuxinta.
Q6: Ma haysaa buug-gacmeed ama muuqaal hawleed si aan wax badan uga ogaano mashiinka?
A6: Haa, waxaanu kuu soo diri doonaa buug-gacmeedka iyo fiidiyowga hawlgalka ka dib markaad na weydiiso.
S7: Haddii ay jiraan qaybo ka mid ah spare parts jabay, sidee loo xaliyaa dhibaatada?
A7: Ugu horreyntii, fadlan sawir ka qaad ama samee muuqaal si aad u muujiso qaybaha dhibaatada.
Ka dib marka dhibka laga xaqiijiyo dhinacayada, waxaanu kuugu soo diri doonaa alaabta alaabta bilaashka ah, laakiin kharashka dhoofinta waa in aad bixiso dhinacaaga.
Q8: Ma haysaa fiidiyoow buug-gacmeed ama hawlgal si aan wax badan uga ogaano mashiinka?
J8: Haa, waxaanu kuu soo diri doonaa buug-gacmeedka iyo fiidiyowga hawlgalka ka dib markaad na weydiisato.
Hore: Mashiinka Buuxinta Daareed ee Toomaatigga ah ee Piston Pump ee Jaamka Malabka
Xiga: Dhalo Yaryar oo Dhalo Malab ah Buuxinta Mashiinada Mashiinada
Buuxinta Dhalada Yaryar ee Dhalada Malabka Pision Buuxinta iyo...
Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon mashiinka buuxinta saliidda cuntada Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Saliida mashiinka buuxinta malab Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah